कसरी तपाईंको बिक्री र मार्केटिङ टोलीहरूले डिजिटल थकानमा योगदान गर्न रोक्न सक्छ Martech Zone
पछिल्ला दुई वर्ष मेरो लागि अविश्वसनीय चुनौती बनेको छ। व्यक्तिगत पक्षमा, मैले मेरो पहिलो नातिनातिनाको साथ आशिष् पाएँ। व्यापारिक पक्षमा, मैले केही सहकर्मीहरूसँग सेनामा सामेल भएँ जसलाई म उच्च सम्मान गर्छु र हामी डिजिटल रूपान्तरण परामर्श निर्माण गर्दैछौं जुन वास्तवमै बन्द छ। निस्सन्देह, त्यसको बीचमा, त्यहाँ एउटा महामारी भएको छ जसले हाम्रो पाइपलाइन र कामदारलाई पटरीबाट हरायो… जुन अब ट्र्याकमा फर्किएको छ। यस प्रकाशन, डेटिङ, र फिटनेसमा फ्याँक्नुहोस्... र मेरो जीवन अहिले चिडियाखाना हो।
एउटा कुरा तपाईंले पछिल्ला दुई वर्षहरूमा याद गर्नुभएको हुन सक्छ कि मैले मेरो पोडकास्टिङ पज गरें। मसँग केही वर्ष पहिले3सक्रिय पोडकास्टहरू थिए - मार्केटिङको लागि, स्थानीय व्यापारको लागि, र दिग्गजहरूलाई समर्थन गर्नका लागि। पोडकास्टिङ मेरो जुनून हो, तर मैले मेरो नेतृत्व पुस्ता र व्यवसायको बृद्धिलाई हेरेँ, यसले तत्काल राजस्व वृद्धि प्रदान गरिरहेको थिएन त्यसैले मैले यसलाई अलग गर्नुपर्‍यो। 20-मिनेटको पोडकास्टले प्रत्येक एपिसोडको तालिका, रेकर्ड, सम्पादन, प्रकाशन र प्रवर्द्धन गर्न मेरो कार्यदिवसको4घण्टा जति काट्न सक्छ। लगानीमा तत्काल प्रतिफल बिना महिनामा केही दिन गुमाउनु भनेको मैले अहिले किन्न सक्ने कुरा थिएन। साइड नोट... मैले समय खर्च गर्ने बित्तिकै म प्रत्येक पोडकास्टलाई पुन: संलग्न गर्नेछु।
डिजिटल थकानलाई धेरै डिजिटल उपकरणहरूको अत्यधिक र समवर्ती प्रयोगले ल्याइने मानसिक थकानको अवस्थाको रूपमा परिभाषित गरिएको छ।
Lixar, डिजिटल थकान व्यवस्थापन
म तपाईंलाई दिनहुँ कति फोन कलहरू, प्रत्यक्ष सन्देशहरू, र इमेलहरू प्राप्त गर्छु भनेर बताउन सक्दिन। धेरैजसो अनुरोधहरू हुन्, केही साथीहरू र परिवार हुन्, र - अवश्य पनि - घाँसको ढिस्कोमा केही नेतृत्व र ग्राहक सञ्चारहरू छन्। मैले सकेसम्म फिल्टर गर्न र समयतालिका बनाउन सक्दो प्रयास गर्छु, तर म राखिरहेको छैन...। मेरो करियरको एक बिन्दुमा, मसँग एक कार्यकारी सहायक थियो र म फेरि त्यो विलासिताको लागि तत्पर छु… तर सहायकलाई र्‍याम्प गर्न पनि समय चाहिन्छ। त्यसोभए, अहिलेको लागि, म केवल यसको माध्यमबाट पीडित छु।
म दिनभरि गर्ने प्लेटफर्महरूमा कम्पाउन्डिङ कार्य, डिजिटल संचार थकान पनि भारी छ। केहि थप निराशाजनक गतिविधिहरु जसले मलाई बाहिर निकाल्छ:
मसँग केहि चिसो आउटबाउन्ड कम्पनीहरू छन् जसले शाब्दिक रूपमा प्रतिक्रियाहरू स्वचालित गर्दछ र मेरो इनबक्स प्रत्येक दिन मूर्ख सन्देशहरू भर्दछ, जस्तै, यसलाई तपाईंको इनबक्सको शीर्षमा प्राप्त गर्दै... वा एउटा इमेल मास्क गर्दै पुन: हामीले पहिले बोलेका छौं भन्ने सोच्नको लागि विषय रेखामा। यो भन्दा रिसाउने कुरा केहि छैन... म शर्त गर्छु कि यो मेरो इनबक्सको आधा हो। मैले तिनीहरूलाई रोक्न भन्‍ने बित्तिकै, स्वचालनहरूको अर्को राउन्ड आउँदैछ। मैले महत्त्वपूर्ण सन्देशहरू मेरो इनबक्समा ल्याउने प्रयास गर्नका लागि केही अविश्वसनीय फिल्टरिङ र स्मार्ट मेलबक्स नियमहरू प्रयोग गर्नुपर्‍यो।
मसँग केही कम्पनीहरू छन् जसले मलाई इमेल मार्फत सम्पर्क गर्न छोड्छन्, त्यसपछि मलाई सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रत्यक्ष सन्देश पठाउँछन्। तिमिले मेरो इ - मेल पयौ? सामाजिक सञ्जालमा तपाईलाई मेरो ब्लक गर्ने निश्चित तरिका हो। यदि मैले तपाईंको इमेल महत्त्वपूर्ण छ भनी सोचेको भए, मैले जवाफ दिने थिएँ... मलाई थप सञ्चारहरू पठाउन र मसँग भएका प्रत्येक माध्यमलाई बन्द गर्न रोक्नुहोस्।
सबैभन्दा खराब सहकर्मीहरू, साथीहरू, र परिवारहरू हुन् जो पूर्ण रूपमा चिन्तित छन् र विश्वास गर्छन् कि म अशिष्ट छु किनभने म उत्तरदायी छैन। मेरो जीवन अहिले भरिएको छ र यो एकदम अचम्मको छ। म परिवार, साथीहरू, काम, घर, फिटनेस, र मेरो प्रकाशनमा व्यस्त छु भन्ने तथ्यलाई मूल्याङ्कन नगर्नु एकदमै निराशाजनक छ। अब म मेरो वितरण गर्छु पात्रो रूपमा साथीहरू, परिवार र सहकर्मीहरूलाई लिङ्क गर्नुहोस् ताकि तिनीहरूले मेरो पात्रोमा समय आरक्षित गर्न सकून्। र म मेरो क्यालेन्डर सुरक्षित गर्छु!
मैले मेरो पाठ सन्देशहरू स्प्याम गर्ने धेरै कम्पनीहरू देख्न थालेको छु... जुन क्रोधित पार्ने भन्दा बाहिर छ। पाठ सन्देशहरू सबै संचार विधिहरूमा सबैभन्दा हस्तक्षेपकारी र व्यक्तिगत हुन्। मलाई एउटा चिसो पाठ सन्देश मलाई तपाईंसँग फेरि कहिल्यै व्यापार नगर्ने पक्का तरिका हो।
म एक्लो छैन ... PFL को नयाँ सर्वेक्षण परिणाम अनुसार:
सी-लेभल उत्तरदाताहरू मार्फत प्रबन्धकले 2.5 गुणा m भन्दा बढी प्राप्त गर्दछअयस्क साप्ताहिक प्रमोशनल इमेल, औसत प्रति हप्ता 80 इमेलहरू। साइड नोट... म एक दिनमा त्यो भन्दा बढि पाउँछु।
उद्यम पेशेवरहरूले एक प्राप्त गर्छन् प्रति हप्ता 65 इमेलहरूको औसत.
हाइब्रिड कामदारहरू प्राप्त गर्छन् प्रति हप्ता मात्र 31 इमेल.
पूर्ण रूपमा टाढाका कामदारहरू प्राप्त गर्छन् प्रति हप्ता 170 भन्दा बढी इमेलहरूऔसत कामदारको तुलनामा ६ गुणा बढी इमेलहरू।
माथि सबै कर्मचारीहरूको आधा काममा प्राप्त हुने डिजिटल प्रमोशन कम्युनिकेसनको भोल्युमका कारण थकानको अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ। C-स्तर उत्तरदाताहरूको 80% अभिभूत छन् तिनीहरूले प्राप्त गर्ने डिजिटल प्रमोशनहरूको संख्याद्वारा!
म कसरी डिजिटल संचार थकान संग व्यवहार गर्छु
डिजिटल संचार थकान को लागी मेरो प्रतिक्रिया हो:
रोक्नुहोस् - यदि मैले धेरै चिसो इमेल वा सन्देशहरू प्राप्त गरें भने, म व्यक्तिलाई रोक्न र मलाई उनीहरूको डाटाबेसबाट हटाउन भन्छु। अधिकांश समय, यो काम गर्दछ।
माफी नमाग्नुहोस - म कहिल्यै भन्दिन "माफ गर्नुहोस् ..."जबसम्म मैले कुनै निश्चित समयमा प्रतिक्रिया दिनेछु भन्ने अपेक्षा राखेको छु। यसमा भुक्तान गर्ने ग्राहकहरू पनि समावेश छन् जसलाई मैले उनीहरूसँग समय तोकेको छु भनेर सम्झाउँछु। म पूर्ण काम र व्यक्तिगत जीवनमा व्यस्त छु माफी छैन।
मेटाउन - म प्रायः कुनै प्रतिक्रिया बिना सन्देशहरू मेटाउँछु र धेरै मानिसहरूले मलाई फेरि स्प्याम गर्ने प्रयास गर्न परेशान गर्दैनन्।
फिल्टर - म मेरो फारमहरू, इनबक्स, र अन्य माध्यमहरू डोमेनहरू र किवर्डहरूका लागि फिल्टर गर्छु जुन मैले कहिल्यै प्रतिक्रिया दिने छैन। सन्देशहरू तुरुन्तै मेटाइन्छ। के म कहिलेकाहीँ केही महत्त्वपूर्ण सन्देशहरू मिलाउँछु? हो ... ओह राम्रो।
प्राथमिकता दिनुहोस् - मेरो इनबक्स स्मार्ट मेलबक्सहरूको शृङ्खला हो जुन क्लाइन्ट, प्रणाली सन्देशहरू, इत्यादि द्वारा उच्च रूपमा फिल्टर गरिएको छ। यसले मलाई सजिलैसँग प्रत्येक जाँच गर्न र प्रतिक्रिया दिन सक्षम बनाउँछ जब मेरो बाँकी इनबक्स बकवासले अव्यवस्थित हुन्छ।
बाधा नपुर्याउनुहोस् - मेरो फोन Do Not Disturb मा छ र मेरो भ्वाइस मेल भरिएको छ। हो... पाठ सन्देशहरू बाहेक, फोन कलहरू सबैभन्दा खराब व्याकुलता हुन्। म मेरो फोनको स्क्रिन माथि राख्छु ताकि म यो सहकर्मी, ग्राहक, वा परिवारको सदस्यको महत्त्वपूर्ण कल हो कि भनेर हेर्न सक्छु, तर अरू सबैले मलाई कल गर्न रोक्न सक्छन्।
तपाईं डिजिटल संचार थकान मद्दत गर्न के गर्न सक्नुहुन्छ
यहाँ आठ तरिकाहरू छन् जुन तपाईंले आफ्नो बिक्री र मार्केटिङ संचार प्रयासहरूमा मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ।
व्यक्तिगत प्राप्त गर्नुहोस् - तपाइँको प्राप्तकर्तालाई थाहा दिनुहोस् कि तपाइँ किन उनीहरूसँग कुराकानी गर्न आवश्यक छ, अत्यावश्यकताको भावना, र यो उनीहरूको लागि किन लाभदायक छ। मेरो विचारमा, खाली "म तपाईलाई समात्ने प्रयास गर्दैछु..." सन्देश भन्दा खराब अरू केही छैन। मलाई परवाह छैन... म व्यस्त छु र तपाईं मेरो प्राथमिकताको तलमा झर्नु भयो।
स्वचालनको दुरुपयोग नगर्नुहोस् - केहि सन्देशहरू व्यवसायहरूको लागि महत्त्वपूर्ण छ। परित्याग गरिएका किनमेल कार्टहरू, उदाहरणका लागि, तिनीहरूले कार्टमा उत्पादन छोडेका छन् भनेर कसैलाई थाहा दिनको लागि प्रायः केही रिमाइन्डरहरू चाहिन्छ। तर यसलाई अत्यावश्यक नगर्नुहोस्... म यी ग्राहकहरूको लागि खाली ठाउँ दिन्छु... एक दिन, केही दिन, त्यसपछि दुई हप्ता। सायद तिनीहरूसँग अहिले खरिद गर्न नगद छैन।
अपेक्षाहरू सेट गर्नुहोस् - यदि तपाइँ स्वचालित वा फलो अप गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने, व्यक्तिलाई थाहा दिनुहोस्। यदि मैले एउटा इमेलमा पढें कि चिसो कल केही दिनमा फलोअप हुन गइरहेको छ भने, म तिनीहरूलाई आज चिन्ता नगर्न जानकारी दिनेछु। वा म फिर्ता लेख्छु र तिनीहरूलाई म व्यस्त छु र अर्को क्वार्टरमा आधार छुन्छु।
सहानुभूति देखाउनुहोस् - मसँग धेरै पहिले एक सल्लाहकार थिए जसले प्रत्येक पटक उसले पहिलो पटक कसैसँग भेट्दा, उसले आफ्नो परिवारमा घाटा भएको बहाना गर्यो। उसले के गरिरहेको थियो त्यो व्यक्तिको लागि आफ्नो सहानुभूति र आदर समायोजन थियो। के तपाईं अन्त्येष्टिमा टाढा रहेको कसैलाई ईमेलहरू स्वचालित गर्नुहुन्छ? मलाई शंका लाग्छ; म शंका गर्छु। किनभने यो तपाईंको लागि महत्त्वपूर्ण छ यसको मतलब यो उनीहरूको लागि महत्त्वपूर्ण छैन। समानुभूतिपूर्ण हुनुहोस् कि तिनीहरूसँग अन्य प्राथमिकताहरू हुन सक्छन्।
अनुमति दिनुहोस् - बिक्रीको लागि सबै भन्दा राम्रो तरिकाहरू मध्ये एक भनेको कसैलाई भन्नको लागि अनुमति दिनु हो होइन। मैले गत महिना सम्भावितहरूलाई केही इमेलहरू लेखेको छु र मैले उनीहरूलाई यो एक मात्र इमेल हो जुन उनीहरूले प्राप्त गरिरहेछन् र उनीहरूलाई आवश्यक छैन भन्ने कुरा सुनेर म धेरै खुसी छु। मेरो सेवाहरूको। नम्रतापूर्वक व्यक्तिलाई होइन भन्नको लागि अनुमति दिनुले उनीहरूको इनबक्स सफा गर्न मद्दत गर्नेछ र सम्भावित सम्भावनाहरूलाई क्रोधित गर्न समय बर्बाद नगर्न सक्षम बनाउँछ।
प्रस्ताव विकल्प - म सधैं चासोको सम्बन्ध समाप्त गर्न चाहन्न, तर म अर्को विधि वा अर्को समयमा संलग्न हुन चाहन्छु। तपाइँको प्राप्तकर्तालाई अन्य विकल्पहरू प्रस्ताव गर्नुहोस् - जस्तै एक महिना वा चौथाईको लागि ढिलाइ, भेटघाटको लागि तपाइँको क्यालेन्डर लिङ्क प्रदान गर्ने, वा सञ्चारको अर्को माध्यम रोज्ने। तपाइँको मनपर्ने माध्यम वा संचार को लागी विधि उनीहरुको नहुन सक्छ!
भौतिक प्राप्त गर्नुहोस् - लकडाउनहरू कम हुँदै जाँदा र यात्रा खुल्दै जाँदा, मानिसहरूलाई व्यक्तिमा भेट्नको लागि यो समय हो जहाँ सञ्चारले मानिसहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चार गर्न आवश्यक पर्ने सबै भावनाहरूलाई समेट्छ। गैर-मौखिक संचार सम्बन्ध स्थापित गर्न आवश्यक छ ... र त्यो पाठ सन्देशहरू मार्फत पूरा गर्न सकिँदैन।
प्रत्यक्ष मेल प्रयास गर्नुहोस् - अनुत्तरदायी प्राप्तकर्तालाई थप हस्तक्षेपकारी माध्यमहरूमा सार्नु गलत दिशा हुन सक्छ। के तपाईंले प्रत्यक्ष मेल जस्ता अधिक निष्क्रिय माध्यमहरू प्रयास गर्नुभएको छ? हामीले प्रत्यक्ष मेलमार्फत सम्भाव्यताहरू लक्षित गर्नमा ठूलो सफलता पाएका छौं किनभने धेरै कम्पनीहरूले यसको फाइदा उठाउँदैनन्। जबकि एक इमेल डेलिभर गर्न को लागी धेरै खर्च गर्दैन, तपाईको प्रत्यक्ष मेल टुक्रा हजारौं अन्य प्रत्यक्ष मेल टुक्राहरु संग मेलबक्स मा गाडिएको छैन।
जबकि खराब रूपमा लक्षित प्रत्यक्ष मेललाई उपभोक्ताहरूले प्राय: अफ-बेस डिजिटल विज्ञापनहरू वा इमेल विस्फोटहरू जस्तै बेवास्ता गर्नेछन्, ठीकसँग कार्यान्वयन गरिएको प्रत्यक्ष मेलले साँच्चै यादगार र प्रभावकारी अनुभवहरू सिर्जना गर्न सक्छ। जब संगठनको समग्र मार्केटिङ रणनीतिमा एकीकृत हुन्छ, प्रत्यक्ष मेलले कम्पनीहरूलाई अझ बढी ROI चलाउन र वर्तमान र भविष्यका ग्राहकहरू बीच ब्रान्ड आत्मीयता बढाउन अनुमति दिन्छ।
निक रुन्योन, पीएफएलका सीईओ
सबैजना डिजिटल थकान अनुभव गर्दै छन्
आजको व्यापार परिदृश्यमा, छापहरू, क्लिकहरू, र माइन्डसेयरको लागि प्रतिस्पर्धा उग्र छ। बढ्दो शक्तिशाली र सर्वव्यापी डिजिटल मार्केटिङ उपकरणहरूको बावजुद, धेरै व्यवसायहरूले आफूलाई ग्राहकहरू र सम्भावनाहरू बीच कर्षण प्राप्त गर्न संघर्ष गरिरहेको भेट्टाउँछन्।
धेरै कम्पनीहरूले दर्शकहरूको ध्यान खिच्न सामना गर्ने कठिनाइहरूलाई अझ राम्ररी बुझ्नको लागि, PFL ले 600 भन्दा बढी US-आधारित उद्यम पेशेवरहरूको सर्वेक्षण गर्‍यो। PFL को नतिजा २०२२ हाइब्रिड दर्शक संलग्नता सर्वेक्षण व्यक्तिगतकरण, सामग्री, र प्रत्यक्ष मेल जस्ता भौतिक मार्केटिङ रणनीतिहरूले ब्रान्डहरूको क्षमताहरूमा जलेको दर्शकहरूमा पुग्न महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने फेला पारेको छ।
इन्फोग्राफिक डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
600 भन्दा बढी यूएस-आधारित उद्यम पेशेवरहरूको सर्वेक्षणबाट मुख्य निष्कर्षहरू समावेश छन्:
उद्यम कर्मचारीहरूको 52.4% तिनीहरूले प्राप्त गर्ने डिजिटल सञ्चारको उच्च मात्राको परिणामको रूपमा डिजिटल थकान अनुभव गरिरहेका छन्।
C-स्तर उत्तरदाताहरूको 80% र प्रत्यक्ष-स्तर उत्तरदाताहरूको 72% तिनीहरूले संकेत गर्छन् डिजिटल प्रचार संचार को मात्रा द्वारा अभिभूत महसुस गर्नुहोस् काममा प्राप्त गर्छन्।
56.8% सर्वेक्षण गरिएका पेशेवरहरू हुन् इमेल भन्दा भौतिक मेल मार्फत प्राप्त भएको केहि खोल्ने सम्भावना बढी हुन्छ.
आजको ध्यान अर्थतन्त्रमा, दर्शकहरूलाई समात्ने र उनीहरूको संलग्नता कमाउने क्षमता दुर्लभ वस्तु भएको छ। डिजिटल थकान धेरै व्यक्तिहरूको लागि एक वास्तविकता हो, जसको मतलब ब्रान्डहरूले ग्राहकहरूलाई कारबाही गर्न प्रेरित गर्न नयाँ तरिकाहरू खोज्नुपर्छ। हाम्रो नवीनतम अनुसन्धानले आजको अत्यधिक प्रतिस्पर्धी B2B मार्केटिङ परिदृश्य र कसरी कम्पनीहरूले हाइब्रिड रणनीतिहरू ग्राहकहरू र सम्भावनाहरूसामु खडा हुन प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने कुरामा प्रकाश पार्छ।
यहाँ सम्बद्ध सर्वेक्षण परिणामहरूको साथ पूर्ण इन्फोग्राफिक छ:
खुलासा: म यसको लागि मेरो सम्बद्ध लिंक प्रयोग गरिरहेको छु पात्रो रूपमा यस लेखमा।
टैग: 2022क्यालेन्डलीडिजिटल संचार थकानडिजिटल थकानप्रत्यक्ष मेलसंलग्नता सर्वेक्षणहाइब्रिड दर्शक संलग्नता सर्वेक्षणइंफोग्राफ़कlixarमार्केटिङनिजीकरणव्यक्तिगत प्रत्यक्ष मेलव्यक्तिगत मेलpflशारीरिक बजार